Olee Otú Ndị Mmadụ Si Ama Ihe Na-akụnụ n’Oge Baịbụl?
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Altai Alur Amharic Amis Arabic Armenian Aymara Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Bashkir Bassa (Cameroon) Belize Kriol Bengali Bicol Boulou Bulgarian Cakchiquel (Western) Catalan Cebuano Chichewa Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitonga (Zimbabwe) Chitumbuka Chiyao Chol Chuvash Cibemba Cinyanja Croatian Czech Damara Dangme Danish Digor Douala Dutch Edo Efik English Esan Estonian Ewe Fijian Finnish Fon French Ga Garifuna Georgian German Greek Guadeloupean Creole Guarani Gujarati Gun Haitian Creole Hausa Hebrew Herero Hiligaynon Hindi Hiri Motu Hungarian Ibanag Icelandic Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Japanese Jula Kabiye Kabuverdianu Kannada Kekchi Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kiribati Kirundi Kisonge Kongo Korean Kurdish Kurmanji Kurdish Kurmanji (Caucasus) Kurdish Kurmanji (Cyrillic) Kwangali Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Low German Luganda Lunda Luo Luvale Macedonian Malagasy Malay Malayalam Mam Mambwe-Lungu Marathi Marshallese Maya Mazatec (Huautla) Mbunda Mingrelian Mixe Mixtec (Guerrero) Mongolian Moore Motu Myanmar Nahuatl (Central) Nahuatl (Guerrero) Nahuatl (Huasteca) Nahuatl (Northern Puebla) Ndebele Ndebele (Zimbabwe) Ndonga Nepali Ngabere Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Otetela Pangasinan Papiamento (Curaçao) Persian Pidgin (West Africa) Polish Ponapean Portuguese Portuguese (European) Punjabi Quechua (Ancash) Quechua (Bolivia) Romanian Russian Samoan Sango Sepedi Sepulana Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Sesotho (South Africa) Setswana Shona Sidama Silozi Sinhala Slovak Slovenian Solomon Islands Pidgin South African Sign Language Spanish Sranantongo Swahili Swahili (Congo) Swati Swedish Tagalog Tajiki Tamil Tarascan Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tiv Tlapanec Tojolabal Tok Pisin Tongan Totonac Tshiluba Tsonga Turkish Turkmen Tuvaluan Twi Tzeltal Tzotzil Ukrainian Urhobo Uzbek Uzbek (Roman) Venda Vietnamese Waray-Waray Wolaita Xhosa Yoruba Zande Zapotec (Isthmus) Zulu
Ị CHỌỌ ịmata ihe na-akụnụ, gịnị ka ị na-eme? I nwere ike ile anya n’elekere aka gị ma ọ bụ na klọọkụ gị. I nwere ike hụ na o jirila otu awa na nkeji iri atọ gafee elekere iri na abụọ. Ọ bụrụ na enyi gị ajụọ gị, sị: “Gịnị na-akụ?” Gịnị ka ị ga-agwa ya?
Ihe ị ga-agwa ya dabeere n’ebe i bi. Dị ka ihe atụ, i nwere ike ịgwa ya, sị: “O jirila ọkara gafee elekere mbụ.” N’ebe ụfọdụ, i nwere ike ị sị na ọ bụ “ọkara abụọ,” nke pụtara na ọ fọrọ nkeji iri atọ ka ọ kụọ elekere abụọ.
Ebe ị na-agụ Baịbụl, i nwere ike na-eche otú ndị dịrị ndụ n’oge Baịbụl si gụọ oge. E nwere ụzọ dị iche iche ha si gụọ oge. Akwụkwọ Nsọ Hibru kwuru gbasara ‘isi ụtụtụ,’ ‘ehihie,’ ‘etiti ehihie,’ na “mgbede.” (Jen. 8:11; 19:27; 43:16; Diut. 28:29; 1 Eze 18:26) Mgbe ụfọdụ, Baịbụl na-ekwu oge ihe mere kpọmkwem.
N’oge Baịbụl, a na-enwekarị ndị nche karịchaa n’abalị. Ọtụtụ narị afọ tupu a mụọ Jizọs, ụmụ Izrel kere abalị ụzọ atọ. Ha na-akpọ ya oge nche. (Ọma 63:⁠6) Ndị Ikpe 7:19 kwuru gbasara “oge nche nke etiti abalị.” N’oge Jizọs, ndị Juu na-agụzi oge ka ndị Grik na ndị Rom. Ndị Grik na ndị Rom nwere oge nche anọ n’abalị.
E kwuru gbasara oge nche ndị ahụ ugboro ugboro n’akwụkwọ Matiu, Mak, Luk na Jọn. Dị ka ihe atụ, ọ bụ “n’oge nche nke anọ nke abalị” ka Jizọs jere ije n’elu mmiri gawa n’ebe ndị na-eso ụzọ ya nọ n’ụgbọ mmiri. (Mat. 14:25) N’otu ihe atụ Jizọs mere, ọ sịrị: “A sị na onyeisi ezinụlọ maara oge nche nke onye ohi ji abịa, ọ gaara amụrụ anya ma ghara ikwe ka a waba n’ụlọ ya.”​—⁠Mat. 24:⁠43.
Jizọs kwuru gbasara oge nche anọ ndị ahụ mgbe ọ gwara ndị na-eso ụzọ ya, sị: “Ya mere, na-echenụ nche, n’ihi na unu amaghị mgbe nna nwe ụlọ ga-abịa, ma ọ̀ bụ n’uhuruchi ka ọ̀ bụ n’etiti abalị ka ọ̀ bụ mgbe oké ọkpa ji akwa ka ọ̀ bụ n’isi ụtụtụ.” (Mak 13:35) Oge nche nke mbụ bụ “n’uhuruchi.” Ọ na-amalite mgbe anyanwụ dara ruo n’ihe dị ka elekere itoolu nke abalị. Oge nche nke abụọ bụ “n’etiti abalị.” Ọ na-amalite n’ihe dị ka elekere itoolu nke abalị ruo n’elekere iri na abụọ nke etiti abalị. Oge nche nke atọ bụ “mgbe oké ọkpa ji akwa.” Ọ na-amalite n’elekere iri na abụọ nke etiti abalị ruo ihe dị ka n’elekere atọ nke abalị. Ọ ga-abụ n’oge nche a ka oké ọkpa kwara n’abalị ahụ e jidere Jizọs. (Mak 14:72) Oge nche nke anọ bụ “n’isi ụtụtụ.” Ọ na-amalite n’ihe dị ka n’elekere atọ nke abalị ruo mgbe anyanwụ wara.
N’agbanyeghị na ihe ndị e ji amata oge taa adịghị n’oge Baịbụl, ha nwere otú ha si amata oge, ma n’ụtụtụ ma n’abalị.